Musikana asingaonekwe: chokwadi cheropa chevechidiki vazhinji nhasi | Zvazvino Zvinyorwa
John Ortiz | | Biography, Vechidiki Mabhuku, Nhema nhema
Bhuruu Jeans mutsara
Musikana asingaonekwe inoverengeka nemunyori wemunyori wemunyori wemunyori munyori Francisco de Paula Fernández González, anozivikanwa seBlue Jeans. Iri basa rakaburitswa Kubvumbi 05, 2018, naro munyori akashinga kupinda mumhando yacho thriller ndokutanga isingazivikanwe trilogy kubhuku rekutanga. Mune chirongwa chematare chemapurisa ichi, musikana wechidiki anopondwa pachikoro chake, nzvimbo izere nenhema uye nevanofungidzirwa.
Bhuruu Jeans yakaburitsa nyaya umo vechidiki vaive ma protagonists, vachinyatso kuratidza matambudziko avanotarisana nawo uye nemabatiro avanowanzoita navo. Zvayo, inobata pazvinhu zvine chekuita, senge: kudheerera, midhiya enhau, nhau dzekunyepedzera, uye zvido zvebonde. Chinangwa chemunyori ndechekutarisisa izvo zviri kuitika kune vechidiki parizvino.
1 Pfupiso Musikana asingaonekwe
1.1 Zvese zvinotanga
1.2 Kusangana kusingatarisirwi
1.3 Bvunzo dzekupedzisira
1.4 Kufona kunonakidza
1.5 Zvinotyisa kuwana
2 Kuongorora Musikana asingaonekwe
3.1 Bhuruu Jeans Inoshanda
Resumen Musikana asingaonekwe
NeChishanu, Chivabvu 19, 2017, vadiki Aurora Iye anotsvaga kuburikidza nehembe dzake dzakasakara kuti chipfeko chibude. Perekedza kuongorora kwake nenziyo yake yaanofarira: "Castle pachikomo" naEd Sheeran. Nezvo edza kufuratira chokwadi in the uyo anogara pamwe chete naamai vake, Vera. Vaviri vakave nenguva yakaoma shure kwababa vake -Bernard- ndichavasiya makore matatu apfuura.
Hwaive husiku hwaipisa Aurora iye pakupedzisira anowana chekupfeka, anozora makeup yake, uye anomira kuti atarise wachi yake: yakanga iri sere o'clock. Tisati tasimuka, gamuchirai WhatsApp message: "Unouya izvozvi? Ini handizokwanisi kugara kwenguva refu. Kusvikira mapfumbamwe o'clock. Kurumidza". Munguva pfupi, Anotora zvinhu zvake oenda kunzvimbo yakasarudzwa: iyo Rubén Darío Institute, iyo yaive padhuze nekona.
Musikana asingaonekwe: ...
Pakusvika pachikoro - icho change chichivhurirwa makirasi emanheru-, Aurora inokwanisa kupinda isina kucherechedzwa. Iye anoenda kukamuri rinokiyira asi anomira kana asvika munhandare yemitambo, kubvira jaya raidzidzira basketball. Kuti asaonekwe, anosarudza kugara ipapo kusvika nzvimbo yacho yajeka. Zvichakadaro, anotumira WhatsApp kune chero munhu akamirira kuti atsanangure zvakaitika, asi hapana chaanowana.
Maminiti gare gare, jaya racho rinoenda uye Aurora pakarepo famba kuenda kwauri kuenda. Kana achipinda muimba yekupfeka haashaye chero munhu, funga kuti pamwe zuva rako raive nechimwe chinhu chisingatarisirwe. Pakarepo, vanovhura musuwo, mukadzi wechidiki anotendeuka nekukurumidza, asi shungu dzake dzakadzima paakaona kuti ndiani asvika. Mukadzi wechidiki - anotya - anogumburwa nekudonha, panguva imwechete iyo yaanonzwa mazwi anoti: "Mhoroi, handisini here munhu wawaitarisira?"
Husiku ihwohwo, Julia - waanodzidza naAurora-- anodzidza bvunzo dzake dzekupedzisira naEmilio, izvi kuburikidza nefoni yevhidhiyo paSkype. Ivo vaviri shamwari dzepamoyo kubvira paakatama - achikurudzirwa nebasa rababa vake - kuguta diki makore matatu apfuura. Mushure mekubvumirana kusangana zuva rinotevera rekudya kwemangwanani uye kuenderera mberi nezvidzidzo zvavo, vanoonekana ndokupedza kufona.
Julia Anouya pasi kuzodya, amai vake - Aitana - vaive varaira pizza. Miguel Ángel, baba vemhuri, anovaudza nezve tsaona. Panguva iyoyo, mukadzi wechidiki anogamuchira kufona zvisingazivikanwi; enda uye inova Vera, anobvunza hongu mwanasikana wako Aurora anaye.
Julia anoshamisika, nekuti haina hukama neumwe wake akasurukirwa Iye naEmilio vanotomusarudza semusikana asingaoneki.
Mumaawa ekutanga eMugovera Vera akashuma mwanasikana wake asipo uye pakarepo nyaya yacho yakapihwa Sajeni Miguel Ángel, baba vaJulia. Mangwanani akatevera, mutumbi waAurora usina hupenyu wakawanikwa pachikoro, nekurohwa kwakasimba kumusoro nekambasi padivi pake. Chiitiko chinotyisa chakavhundutsa munhu wese, zvese kuchikoro nemudhorobha.
Julia akagumbuka nenyaya iyi, akabva atoudza Emilio kuti vanofanira kubvunza nezve zvakaitika. Iye mukadzi akangwara musikana uye akaropafadzwa kuve neruoko rwekutanga ruzivo kubva kuna baba vake naamai - anova coroner. Wese munhu mubazi anozobvunzurudzwa, seizvi, zvishoma nezvishoma uye apo uchiongorora mhondi yeAurora, zvakavanzika zvinoshamisa nerima zvinozarurwa.
Kuongorora Musikana asingaonekwe
Musikana asingaonekwe inoitika mu Mapeji 544 rakakamurwa ne chirevo, zvitsauko 72 uye epilogue. Chikamu chega chega chipfupi, chine mutauro wakapfava uye nhaurirano pfupi dzinoita kuti kuverenga kuve nyore uye kunakidze. Nhoroondo yacho ndeye yakataurwa mumunhu wechitatu uye rangano rinoitika pakati pe zviripo uye dzimwe nguva dzekare, kunyanya zvehupenyu hweAurora.
Ndiye mukadzi wechidiki Makore makumi mashanu nematatu uyo anodzidza chikoro chesekondari uye Akave akasarudzika uye akazivisa kubvira zuva rakasiya baba vake. Hunhu hwake hwakamutadzisa kuva neshamwari, pamusoro pezvo, anga ari nyajambwa wekurambwa nekusekwa pane akati wandei. Iye inopondwa nenzira isinganzwisisike kuchikoro kwaaive mugore rake rekutanga rechikoro chesekondari.
Iye ndiye protagonist wenyaya, musikana mudiki yehungwaru hunoshamisa neiyo yakanyanya kukwirira IQ uye inoshamisa ndangariro. Iye anofarira zvinyorwa zvakavanzika, kunyanya izvo zvaAgatha Christie; iye anoda kutamba chess uye anonamata Magnus Carlsen. Sezvo iwe uchiyedza kugadzirisa kupondwa kweAurora, iwe unozotarisana neyakaomesesa dambanemazwi rehupenyu hwako hwese.
Iye mukomana asina kujairika, akavharirwa mune rake hunhu hwevanhu. Zvisinei, akadaro zvakasiyana zvachose paanenge ana Julia; vari shamwari dzepamwoyo nevanovimba navo. Kunyangwe iye pakutanga akakwezvwa nenzira yake yekuve, hukama hwavo hwaingova hushamwari. Emilio anoperekedza Julia mukuferefeta kwekufa kusingazivikanwe kweAurora, izvo zvinomutsa maari hunhu hwenhau.
In the thriller Hunhu hwakasiyana huchabatanidzwa, kusanganisira vadzidzisi, vadzidzi uye vagari vemumusha. Pakati pavo Michelangelo anomira kunze -Mapurisa sajeni Kutonga kwenzvimbo- uye Aitana - forensic-, vese vari vaviri vaitarisira nyaya yaAurora.
Francisco de Paula Fernández González akaberekerwa muSeville munaNovember 7, 1978. Akagara hudiki hwake muCarmona, ikoko aidzidza pachikoro cheSalesianos uye pachikoro chesekondari cheMaese Rodrigo. Akatanga yunivhesiti aine degree remutemo, asi mumwedzi mishoma akaziva kuti raive risiri basa rake. Akasiya basa, akaenda kuMadrid uye akapedza kudzidza semutori wenhau kubva kuEuropean Universityuye iye nyanzvi munharaunda yemitambo.
Pane dzakawanda nguva akashanda kune akasiyana midhiya nebasa rake semutapi venhau. Aive zvakare murairidzi wevana mumafsal zvikwata zvePalestra Atenea Sports Club. Mushure mezviitiko izvi, akafunga kuzvipira kunyora, achisarudzira kugadzirwa kwemanovel mumhando yevechidiki, izvo zvinosanganisira kudanana uye zvazvino matekinoroji.
Mu 2009, munyori wechiSpanish yakabudiswa Nziyo dza Paula, rondedzero yake yekutanga, izvo yakasainwa se Bhuruu Jeans -Pseudonym yaanozivikanwa nayo nhasi. Yake yekutanga ficha yakatanga yevechidiki kudanana trilogy yezita rimwe chete. Kubudirira kwemabhuku aya kwakabvisa basa rake. Kubva ipapo akanyora matatu ekuwedzera akateedzana uye yake yekupedzisira yakazvimirira inova, Iyo kufarar: Musasa (2021).
Bhuruu Jeans Inoshanda
mudungwe Nziyo dza Paula:
Nziyo dza Paula (2009)
Unoziva kuti ndinokuda? (2009)
Ndinyaradze nekutsvoda (2011)
mudungwe Kirabhu yeVasina Kunzwisiswa:
Mangwanani mwanasikana wamambo! (2012)
Usanyemwere kuti ndinowira murudo (2013)
Ndingarota newe here? (2014),
Ndine chakavanzika: diari raMeri (2014)
mudungwe Chinhu chakareruka:
Chinhu chakareruka sekutumira tweet ini ndinokuda (2015)
Chinhu chakareruka sekutsvoda iwe (2016)
Chinhu chakareruka sekuva newe (2017)
mudungwe Musikana asingaonekwe:
Musikana asingaonekwe (2018)
Iko kristall puzzle (2019)
Vimbiso yaJulia (2020)
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhema nhema » Musikana asingaonekwe